Mustaqbalka moodada gacanta ee gacanta lagu hayo daabacaadda 3D | Abuurista khadka tooska ah
Melisa Perrotta | | General, Dhiirrigelinta, Technologies
Waxaan hadda ku noolnahay xilli ay horumarka tikniyoolajiyaddu si xawli ah u kordhayaan, qiime jaban iyo marin-u-hel badan. Muddadan loo yaqaan «Kacaankii Saddexaad ee Warshadaha, wuxuu markhaati ka yahay isbeddelada ku yimid agabkii iyo geeddi-socodkii wax soo saar ee ay soo mareen. Dareenkan, fikradaha ganacsiga ayaa si kaladuwan loogu ogolaaday noocyada inay balaariyaan jaangooyooyinkooda wax soo saar.
Waa qayb aad u wanaagsan saameyn ku yeeshay isbedelkani waa warshadaha moodada; in ilaa hada la ilaaliyo geedi socodka wax soo saarka ee ku saleysan jarista iyo wax u sameynta. The koritaanka iyo turxaan bixinta tikniyoolajiyadda 3D, si sax ah loogu yeero "wax soosaarka lagu daro"; waxay awood u siisay sumadaha dharka inay soo saaraan mashruucyo hal abuur iyo hal abuur badan.
Naqshadayaashu waxay adeegsanayeen tikniyoolajiyaddan illaa 2010. Hase yeeshee, hadda oo keliya ayay suurtagal noqotay in la soo saaro softiweer u oggolaanaya fulinta mashaariicda faahfaahin adag iyo tayo wanaagsan oo fiilo leh.
Xaqiiqdu waxay tahay in xeel-dheernimadeedu ay dhalinayso karti aad iyo aad u badan, taas oo ballaadhiyaan jihada fursadaha naqshadeynta. Sidan ayay ku sameyn karaan waxyaabo sida soo gaabin waqtiyada hogaaminta, yareynta amarrada, kobcinta hal-abuurka, ama awood u siiso naqshadaha horay loo soo saari karin.
1 U fiirso Mustaqbalka
1.1 Fursadaha warshadaha moodada
1.2 Daabacaadda gaarka ah ee guriga
1.3 Fursadaha naqshadayaasha madaxbanaan
U fiirso Mustaqbalka
Fursadaha warshadaha moodada
Noocga Nike ee kabaha ugu horreeya daabacaadda 3D
Mid ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan ee daabacaadda 3D waa iyada karti u yeelashada nooc dhakhso leh. Tan macnaheedu waa naqshadeeyayaasha inay soo saaraan shaybaar deg deg ah ama caaryado. Sidan oo kale in wax soo saarka iyo waqtiyada isku imaatinku ay yaraan doonaan, taas oo u oggolaanaysa tiro badan oo tijaabo ah. Dhab ahaantii, Daabacaadda 3D waxay gacan ka geysan doontaa in si la yaab leh loo dhufto mugga wax soo saarka.
Marka laga reebo inay u muuqato in daabacaadda 3D ay waxyeello u leedahay deegaanka sababtoo ah adeegsiga balaastigga maadada ugu weyn, fasiraaddan ayaa khaldan. Xaqiiqdii waa inaad xusuusataa inay wax yihiin waara, maahan sababtoo ah waa wax la baabi'in karo, laakiin maxaa yeelay waxay u hoggaansameysaa xasiloonida deegaanka, bulshada iyo dhaqaalaha.
Adidas 3D kabo isboorti oo daabacan
Xaaladdan oo kale, daabacaadda 3D waa mid ka mid ah geeddi-soo-saarka Waxay soo saartaa raad yar oo kaarboon ah maaddaama xaddiga qashinka xad-dhaafka ah ee hawshu yahay mid aan waxba ka jirin. Intaa waxaa dheer, ku dhowaad dhammaan walxaha waa la isticmaalay oo deegaanka ama dhiig-miirashada aadanaha looma adeegsan, taas oo lid ku ah waxa tixraacyo badani ku sameeyaan qaabka hadda jira. Xaqiiqdii, waxyaabaha la isticmaalay dib ayaa loo isticmaali karaa isla badeecada la abuuray xitaa dib ayaa loo isticmaali karaa.
Daabacaadda gaarka ah ee guriga
Laakiin ka waran haddii aan kuu sheego in mustaqbalka daabacaadda 3D ay gebi ahaanba baabi'in karto warshadaha wax soo saarka dharka? Waxa laga yaabaa inaanay u muuqan mid macquul ah, laakiin marka laga hadlayo tiknoolajiyadda ma jiraan wax aan macquul ahayn. Arrintan la xiriirta, Naqshadeeye Danit Peleg wuxuu soo saaray 2015 ururinta dharka ugu horeeya 100% oo laga sameeyay daabacaadda 3D. Waxa kale oo uu u saadaaliyay inuu yahay urur ururin lagu daabaci karo guriga oo leh madbacado 3D ah oo qof walba heli karo.
Fikradiisu waxay kicisay warshadaha moodada, maadaama laga soo qaatay farshaxanka cusub, waan heli karnaa baro-kici habka wax soo saarka dharka sidaan maanta ku naqaano. Mustaqbalka, laga yaabee inaan awoodno ka soo dejiso moodooyinka 3D shabakadda ku socota "nashqadeeyayaasha dharka dhijitaalka ah." Markaa waxaan si gaar ah ugu daabici karnaa dharka aan u baahanahay saacado gudahood. Iyo, haddii waxaas oo dhami ay gacanta ku hayaan waxyaabaha ugu fiican, laga yaabee inaan ku dhejin karno funaanad duug ah oo aan u rogi karno mid cusub oo loo adeegsado waarta.
Halkan ka daawo fiidiyowga aruurinta:
Fursadaha naqshadayaasha madaxbanaan
Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn marka laga shaqeynayo astaanta dharka waa baahida loo qabo in la soo saaro tiro badan oo unugyo ah. Qeybtaan wax soo saar waxaa lagu xirey ifafaalaha «Dhaqaalaha Iskeelka». Sharcigan dhaqaale wuxuu qeexayaa in sare u kaca tirada wax soo saarka sicirka alaab kasta uu hoos u dhacayo. Taas oo macnaheedu yahay Naqshadeeyayaasha madaxbannaan waa inay la kulmaan maalgashi aad u sarreeya haddii ay doonayaan inay helaan warshad soo saarta dharkooda si loogu iibiyo qiimo jaban. Sidaa awgeed, dharka naqshadeeye guud ahaan waa ka qiimo sarreeya celceliska dukaanka. Dhanka kale, waqtiga dhalmada waa mid aad u dheer, maaddaama guud ahaan hannaanka saadka uu yahay.
Dharka 3D ee daabacan ee Michael Schmidt u qoray Dita Von Teese
Dareenkan, Daabacaadda 3D waxay siisaa naqshadeeyaha suurtagalnimada inuu ka madaxbannaan karo wakiil wax soo saar dibadeed. Sidan ayaa iyaga laftoodu ku matali karaan qadarka ay rabaan, iyagoo ka hela raaxada aqoon isweydaarsigooda. Waxay soo saari karaan muddada ay u baahan yihiin, iyaga oo aan dhigin amarrada ugu yar ee ugu yar sida kuwa ay u baahan yihiin warshaduhu. Si kale haddii loo dhigo, waa ka dhakhso badan yahay, waxtar badan yahay isla markaana awood u leh inuu hoos u dhigo qiimaha saadka.
Dhinaca kale, mahadnaqidda fududaanta tusaalaynta, naqshadeeyayaal badan oo madaxbannaan ayaa tijaabiya fikradaha iyo fikradaha wax soo saarka. Tafaariiqleyda qaar ayaa u adeegsada qaab wax soo saar alaabooyinka lagu iibiyo miisaanka ugu yar dukaamada internetka sida Etsy ama shabakadaha bulshada sida Instagram.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Mustaqbalka moodada gacanta ee gacanta kula jira daabacaadda 3D
Sawir qaade wuxuu socdaal ku marayaa aduunka isagoo sawiraya daaqado iyo albaabo qurxoon